महानगरको महासंग्राम, वीरगन्जमा कस्ले मार्ला बाजी ? « Deshko News
महानगरको महासंग्राम, वीरगन्जमा कस्ले मार्ला बाजी ?
वीरगञ्ज, भदौ २२
प्रमुख आर्थिक नगरी एवं दुई नम्बर प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जको प्रमुख पद हत्याउन दलहरू लागिपरेका छन् । प्रमुख दलसहित मधेसी दल कसरी महानगरको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्नेमा शक्ति खर्चिरहेका छन् । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।
दललाई वीरगन्जका लागि उम्मेदवार छान्न सकस परेको थियो । सबै दलको चासो वीरगन्जका लागि प्रकट हुनुका पछाडि के कारण छ ? वीरगन्जका एक पुराना राजनीतिकर्मी हरेन्द्र सिंह भन्छन्, ‘यो सत्ता र शक्तिसँग गाँसिएको विषय हो । लामो समय वीरगन्जमा बसेर कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय सिंह केही समययता मधेसी पार्टीमा आबद्ध भए पनि स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गर्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो आज मात्रै देखिएको होइन, ०४६ पछिका हरेक निर्वाचनमा दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले वीरगन्जलाई चासोपूर्वक लिँदै आएको छ ।
वीरगन्जका अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवका अनुसार वीरगन्जको नेता भएपछि केन्द्रमा स्थापित हुन सजिलो हुने भएकाले यहाँको नेतृत्व गर्न होड चल्ने गरेको हो । यादव भन्छन्, ‘राजनीतिमा पैसाको महत्व अत्यधिक हाबी भयो, आर्थिक नगरीसमेत रहेको वीरगन्जको नेतृत्वले त्यो सजिलै म्यानेज गर्न सक्छन् भन्ने स्थापित मात्रै होइन, व्यहवारमै देखियो, जसकारण सबैको चासो बढेको हो ।
‘वीरगन्जको महत्व यतिमा सीमित छैनु, अधिवक्ता यादव भन्छन्, ‘यो सहर दुई वर्षअगाडि मात्रै ६ महिना प्रभावित हुँदा हरेक नेपालीको चुलोमा प्रभाव पर्‍यो । यहाँ भारतको महावाणिज्य दूतावासदेखि भारतका अनेकन व्यापारिक संरचना छन् । राजनीतिज्ञ सिंह भन्छन्, ‘जसकारण यहाँका नेतालाई भारतसँग सम्बन्ध बनाउनसमेत सजिलो हुने गरेको देखियो । सिंह भन्छन्, ‘नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव अब बहसको विषय नै छैन, भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो राजनीतिमा महत्ववपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले यहाँको राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्नेले भारतसँग समेत सम्बन्ध विस्तार गर्न मौका पाउँछन्, आर्थिक रूपमा पनि सहज उक्लिन्छन् ।’
‘वीरगन्जको छेउमै कलैया र सिमरा उपमहानगरपालिका छन्, यादव प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘खोइ त्यहाँ उम्मेदवार चयन गर्दा कुनै विवाद भएको देखिएन । तर वीरगन्जको सन्दर्भमा हेर्नुस्, के भयो । वीरगन्ज महानगरपालिकाको उम्मेदवार बन्न नपाएपछि मंगलबार मात्रै राजपा परित्याग गर्दै विमल श्रीवास्तव फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
एमालेले विवादमा मुछिएको नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सरीलाई मेयरमा अघि सारेको छ भने माओवादी केन्द्रले ३१ वर्षीय युवा रहबर अन्सारीलाई मेयरमा अघि सारेको छ ।
कांग्रेस पर्सा जिल्ला सभापति द्विवेदी पहिलो संविधानसभामा पर्साबाट निर्वाचित भएका थिए भने श्रीवास्तव वीरगन्जको पूर्वमेयर हुन् । श्रीवास्तव मेयर हुँदा वीरगन्जको विकास अत्यधिक भएकाले उनी वीरगन्जमा चर्चित छन् । तमलोपामा पुगेका उनी पार्टी महाधिवेशनलगत्तै पार्टी प्रवक्ता भएका थिए । राजपामा उनी महन्थ ठाकुरनिकट नेता मानिन्थे ।